Shoko RaMwari Ndiro Ratinorarama Naro
"Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo maMwari" (Mateo 4:4).
Mwari ndivo vakasika zvinhu. Ndivo vakasikavo munhu. Munhu chete ndiye wakasikwa ari mweya. Zvimwe zvisikwa zvose hazvisi mweya. Mwari vakaita zvokutaura, zvinhu izvi zvikavapo. Aya haasiwo masikiro avakaita munhu. Vakatanga vamusika. Izvi ndizvo zvatinovona muna Genesi 1:26. Vakamusika akafanana navo. Vakamusika kuti ararame savo. Vakazoumba muviri wake. Vakauumba vachishandisa ivhu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Genesi 2:7. Saka tine mashoko maviri atinovona. Rimwe rinoti, "kusika". Rimwe rinoti, "kuumba". Mashoko maviri aya akasiyana. Asi anotiratidza zvakanga zviri kurongerwa munhu naMwari.
Chavakasika wakanga uri mweya wemunhu. Chavakaumba wakanga uri muviri wake. Mushure mazvo, vakafemera mweya wehupenyu mumhino dzemunhu wavakaumba. Mwari vakanga vava kuisa mweya wemunhu muchiumbwa ichi. Chiumbwa chiya chakabva chava munhu wenyama. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Genesi 2:7. Ndiko kusaka munhu akasiyana nedzimwe mhuka. Iwe uri mweya. Hausi muviri wenyama. Zvokudya zvako iShoko raMwari. Ndiro rinodyiwa nemweya wemunhu. Shoko raMwari ndiro rinovaka mweya wako. Ndiro rinokuvaka iwe. Ndiko kusaka Jesu vakataura vachiti, "... munhu haangararami nechingwa bedzi asi neshoko raMwari rose". Tinoverenga mashoko aya muna Ruka 4:4.
Iwe wakazvarwa neShoko raMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Petro 1:23. Ndima iyi inoti, "Nokuti makaberekwa kutsva, zvisingabvi pambeu inovora, asi pane isingavori, neshoko raMwari benyu rinogara nokusingaperi". Saka Shoko iri ndiro rinokuraramisa. Ndiro hupenyu hwako. Chinhu chose chinoraramiswa nechakachizvara. Zvino, iwe wakazvarwa neShoko raMwari.
Kuda ungada kubudirira muhupenyu. Ungada kuti hupenyu hwako hugare huchikwirira. Ungada kuti hugare huchifambira mberi. Unofanira kuzvipa kuShoko raMwari. Ndiro raunofanira kurarama naro. Isu tiri muna Kristu. Tava nehupenyu hwatava nahwo. Hupenyu uhu hunobwinya zvikuru. Ndehwekugara tichibudirira. Asi hunoraramiwa muShoko raMwari. Tinohurarama tichishandisa Shoko raMwari.
Baba vanokosha. Ndinokutendai. Makandipa Shoko renyu. Shoko iri ibenyu. Ndiro randinofarira. Ndinofungisisa Shoko iri nhasi. Ndinoridzeya mumoyo mangu. Nokudaro, ndinovakwa. Ndinogutswa. Hupenyu hwangu hunonatswa. Mweya wangu unodzivirirwa. Izvi zvinoita kuti ndigone kurarama hupenyu hwamakandirongera. Ndinohurarama nhasi. Ndinohurarama mazuva ose. Muzita raJesu. Ameni.
(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rorshona )